Inuu Mar Ooyay, Hadii Uu Hilibka-Kaluunka Jecelyahay & Leo Oo Fariin U Diray Dadka Dhaleeceeya Isaga %
Ciyaaryahanka kooxda kubada cagta Barcelona iyo xulka qaranka kubada cagta Argentina, ee Lionel Messi, ayaa wuxuu wareysi uu siiyay Talefishinta America TV, wuxuu uga hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan nolashiisa.
Hadaba, halkaan hoose waxaan idin kugu soo gudbin doonaa afar qodobood oo si weyn u taabaneysa nolasha laacibkaan kuwaasoo uu faah-faahin dheri uu uga bixiyay wareysigii uu siiyay Muuq-baahiyahaas caanka ah, ee ka bogasho wacan.
Waqtigii Ugu Dambeysay Ee Uu Ooyey: “Waxaan si kaftan ah u ooyey markii uu iidhashay Mateo. Dhalashadiisa waxay ahayd wax aanan filayn iyo mid adag. Mateo waan xasiloonaa. Warka ku saabsan dhalashada cunugeysa saddexaad farxad badan ayaa dareemay.
Ciyaarista Thiago: “Thiago waa uu ka helaa [dheelista] kuabda cagta, wuxuu adaa [maalin walba] Dugsi ku yaala Barcelona, halkaasoo loogu talagalay in caruurta lagu baro ayna ku dheelaan kubada cagta, waana aad ujecel kubada cagta.
Raashiin-cunista: “Ma garan karo waxa aan cunay, laakiin waxaan cunay wax aad u xun sanado badan, markii aan jiray 22 iyo 22 sano. Shukulaato, alfajores [cunta laga helo qaarada Laatin Ameerkia], cabitaannada qafiifka ah.
Wuxuu intaas ku daray: “Hadda waxaan si fiican ucunaa, Kaluunka [Malayga], Hilibka, Qudaarta iyo wax walba, laakiin waa amar iyo wax fiican.
Messi ayaa sii daba dhigay: “Mararka qaar waxoogaa khamri ah, laakiin ma ahan wax dhibaato ah. Wax badan ayaa isbedal markii aan matagay. Waxay yiraahdeen waxay noqon kartaa waxyaabo badan, ugu dambayntii waan is badalay oo mar dambe ma dhicin.
Sida uu arko in la dhaleeceeyo: “Waqtigaan waa ay ii saameyneysaa, in lay dhaleeceeyo waxay iiga dhigesaa mid xun. Laakiin waa ay dhamaaneysaa, hadda maya [ima saameyneyso aniga]. Waan ognahay meesha ay wax ka sheegayaan.
“Taasina ma ahan wax ku saabsan cayaaraha, waxay wax ka sheegayaan nolasha qaaska ah ee qof walba,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, kabtanka xulka qaranka kubada cagta Argentina iyo waliba naadiga Barcelona ee Lionel Messi.
CR7 Oo Sharaxay Sababta Uu Aaminsan Yahay Inuu Dunida Ugu Fiican Yahay & Cida Uu Hibeeyay 4-ley Girona